10 mitsara yekutsaurira kuna vanasekuru iyo inokufadza iwe | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 22/03/2021 19:18 | Mitsara
Sekuru nambuya ndivo vanhu avo apo patinozvarwa vatove vanhu vakuru asi vari chakakosha chikamu chehupenyu hwedu. Hatizive kuti kuvapo kwavo kune muganho uye zvakakosha kuti utende sekondi yega yega yavanoshandisa padivi pedu, vachitidzidzisa zvese nezvehungwaru hwavo hwehupenyu. Saka, Tinoda kukuratidza mimwe mitsara yekuzvipira kuna sekuru nasekuru izvo zvinokufadza.
Vanasekuru vanounza mabhenefiti akakura kuvazukuru vavo, iwo manhamba anofanirwa kuve aripo muhupenyu hwevana kubva pakuzvarwa ... nekuti kana vasiri, uye nguva inopfuura uye dzinoita nyeredzi mudenga, kurwadziwa nekusuwa kwekusavapo kwake kwakanyanyisa.
Naizvozvo, zvakakosha kuti uzive kukosha kwayo uye nebasa rayo rakakosha mukati memhuri yemhuri. Zvisungo zvemanzwiro zvakasikwa pakati pasekuru nasekuru nevazukuru zvakanaka sekureba sekuchengetwa uye kuchengetwa mupfungwa muhupenyu hwemhuri.
1 Vanasekuru muhupenyu hwemhuri
2 Vanasekuru kune vazukuru
3 Ivo vanobatsirwawo
4 Mitsara yekutsaurira kuna vanasekuru
Vanasekuru muhupenyu hwemhuri
Kuva nasekuru nasekuru muhupenyu hwedu kunotibatsira kuti tizere vanhu. Nhasi uno kune vanasekuru vanochengeta vazukuru vavo nekuti vana vavo vanoshanda uye vane magadzirirwo akaomarara. Vamwe havagone kuchengeta vazukuru vavo nezvikonzero zvakasiyana asi ivo vanogara varipo ... vamwe havagone kuvapo panyama nekuda kwedaro asi zvinogara zvichibva pamoyo.
Vanasekuru ndivo rutsigiro rwakanakisisa rwevana vako, vabereki vevazukuru vako. Inzwi rake muchiitiko chehupenyu rinobatsira vana vake mumamiriro mazhinji, avo kunyangwe vari vakuru, vachiri kuramba vachidzidza muhupenyu. Ivo vanonzwira tsitsi nevana vavo uye nenzira iyi vanoona kuti vabereki vavo, vanasekuru vevana vavo vanozogara vari vanyatso kune chero kukakavadzana kwemhuri kana dambudziko. Huchenjeri hwake hunokosha goridhe.
Vanasekuru kune vazukuru
Asi pamusoro pevabereki, ivo vakakoshawo kuvazukuru. Ivo vanhu vasina mhaka vanouya munyika uye vomutsiridza vanasekuru, vanovapa zvinoreva hupenyu nekuvapo kwavo zvakare. Ivo sekuru nasekuru vaive vamwe vabereki vakaoma, ikozvino ivo vanoregerera vanasekuru, nekuti basa ravo harichisiri rekudzidzisa ... kana zvisiri, kungova, tungamira ... uye wadii wadaro? Zvakare kukanganisa nguva nenguva, uye ndizvo zvakanaka!
Zvakakosha kuti nguva yavanopedza nevazukuru vavo inguva yekunakidzwa nekuti kune vadiki, vakaita semavhitamini akanakisa ehupenyu avanogona kupihwa. Sekuru nasekuru vane zvinhu zviviri izvo vana vanoda sekudya, kurara, uye kufema: nguva nekutarisisa. Ivo vanogona kukupa iwe muhuwandu hwakawanda.
Vana vanonzwa kufara pakati pasekuru nasekuru vanovada zvisingaite, vanovateerera nekuvatsigira pese pavanenge vachida. Uye zvakare, ivo vanovatungamira muhupenyu uye vanodzidzisa mavari hunhu hwakadai senge pasina rudo, rukudzo, kutsigira kana the kunzwira tsitsi.
Ehezve, ivo vakakosha zvese muhudiki uye mumatanho akasiyana ehupenyu kwavari varipowo. Munhu mukuru akave nerombo rakaringana kunakirwa navanasekuru vake anozove nehunyanzvi hwehukama nehunhu. Iwe unonzwa kunge munhu mukuru akachinjika kugariro uye nehupenyu pachahwo. Nekuti iwo kukosha kwakakosha kuti uvepo.
Ehe, ivo zvakare vanobatsirwa nekuve nebasa rakakosha mukati memhuri yemhuri. Vanonzwa kubatsira vanokosheswa mukati mehupenyu hwemhuri uye nguva yavo inogarwazve nezviitiko zvesarudzo yavo vega. Nekuti zvirokwazvo, nguva nevazukuru haifanire kunge iri yekumisikidzwa kwavari, asi chimwe chinhu chavanosarudza.
Sekuru nambuya vanoshingairira kuvepo muhupenyu hwevazukuru vavo vane kuzviremekedza kuri nani pane avo vasipo kana vasingakwanise kuve nehukama hwepedyo hwezuva nezuva. Uye zvakare, chisungo chemhuri chemhuri chinosimbiswa, uye Izvi zvakakosha kune wese munhu kugadzikana pamoyo. Chero bedzi hukama huchi chengetwa uye kuremekedzwa uye rudo zvinochengetwa pakati penhengo dzese.
Kune izvi zvese, uye nekuda kwekukosha kwazvakaita muhupenyu hwedu, tinoda kukupa iwe mamwe mitsara ekuzvipira kwavari, nekuti iwo akakosha uye anokodzera aya mazwi erudo nerudo. Nekuti hupenyu hwavo hwakakumikidzwa kuvana vavo uye kuchembera kwavo, kuvana vavo nevazukuru. Pasina kupokana, ivo vanokodzera rukudzo rwese kubva kwatiri uye nezvose zvakanaka zvinhu zvatinogona kuvapa, seaya mazwi akanaka.
Mitsara yekutsaurira kuna vanasekuru
Unogona kuzvitaura zvinonzwika kwavari, uzvitumire paWhatsApp kana vari vanasekuru vechimanje manje, nyora pasi pabepa, kana chero chaunoda! Chinhu chakakosha ndechekuti ivo vazive kuti aya mazwi aunotsaurira kwavari anobva pamoyo pako.
“Hakuchina chinobatika muhupenyu hwedu chakanakisa kupfuura sekuru; maari tina baba, mudzidzisi uye shamwari ”.
“Zvino zvandakakura ndave kunyatsoziva zvazvinoreva kuva neshamwari yepamwoyo. Uye ndinoziva kuti shamwari yepamwoyo ndiwe, sekuru ”.
"Ndinoda kuti muzive kuti ndichagara ndichitakura nyaya dzenyu mumoyo mangu uye rimwe zuva ndichadzitaura kuvazukuru vangu, sekutaura kwamandiita."
"Sekuru, maita basa nekundidzidzisa kuti rudo ndicho chipo chikuru icho chizvarwa chingasiire chimwe."
"Hapana munhu anogona kuitira vana zvinoitwa nasekuru nanambuya: vanosasa rudzi rwekusimudzira pamusoro pehupenyu hwavo."
“Ndakagara ndine rombo rakanaka kuve nemudzidzisi akatanhamara pasi rose pamberi pangu. Sekuru, nemi ndakadzidza kufunga zvangu. Ndatenda!".
"Maita sekuru nasekuru nekuti makandidzidzisa kuti hupenyu hausi nyore nguva dzose, asi munofanira kugara muchienda makasimudza musoro makatarisana nezvinhu sezvazviri kuuya."
"Sekuru munhu ane sirivheri mubvudzi rake uye negoridhe mumoyo make."
"Pese pandinenge ndisingaone mwenje pakupera kwetonji, unoonekwa sekuru, panzvimbo chaipo, panguva yakakwana, kungondibatsira pandinenge ndichida."
"Kana ndikatarisa mumaziso ako ndinoona huchenjeri, tsitsi uye rudo rwakachena kwazvo pasi rose."
Kana iwe uine rombo rakaringana kuve navanasekuru vako padivi pako ... nakidzwa navo! Nekuti nguva yavo chipo chakanakisa chaungave nacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » 10 mitsara yekutsaurira kuna sekuru nasekuru izvo zvinokufadza iwe